Madaxweynaha Hirshabeelle oo ka leexday dariiqii fooshaxumaa ee ay hore u qaadeen Jubbaland iyo Puntland - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Madaxweynaha Hirshabeelle oo ka leexday dariiqii fooshaxumaa ee ay hore u qaadeen Jubbaland iyo Puntland
September 13, 2021 at 21:31 Madaxweynaha Hirshabeelle oo ka leexday dariiqii fooshaxumaa ee ay hore u qaadeen Jubbaland iyo Puntland2021-09-13T21:31:40+02:00
Jowhar (WDN)- Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta furay hadaljeedintii Musharaxiinta Aqalka Sare ee Baarlamaanka F. Soomaaliya ee matelaya Hirshabeelle.
M/weyne Cali Cabdullaahi Guudlaawe
Madaxweynaha Hirshabeelle Md. Cali Cabdullaahi Guudlaawe oo bishan Sebt. 8-dii soosaaray liiska musharixiinta Aqalka Sare oo gaaraya 33 musharax oo u tartamaya 8 kursi, ayaa ay 27 musharax is diiwaan gelisay, kuwaasi oo ka qeyb galaya hadaljeedinta maanta billaabantay.
Md. Guudlaawe ayaa si ka duwan, nidaamkii caddaalad darrada iyo eexda
(nepotism and cronyism) salaysnaa ee ay u maamuleen Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo Siciid Deni u maareeyay liiska u tartamaaasha Aqalka Sare.
Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo inbadan ka soo horjeeday sida Madaxweyne Farmaajo u baalmaray dastuurka iyo sharciga dalka, isaga oo markaas xoogga saaray sidii uu u samayn lahaa maamul gobolleedyo gacan ku rimis ah oo u adeega, ayaa si musuq, nin jeclaysi iyo caddaalad daro ah u mamulay doorashooyinkii Aqalka sare ee dhawaanta ka dhacay labadaasi deegaan.
M/weyne Axmed Madoobe iyo Siciid Deni
Waxa dad badan fajiciso ku noqotay in eedayntii ay Farmaajo u jeedinayeen Axmed Madoobe iyo Siciid Deni, mid ka daran ay ku kaceen, iyaga oo si badheedh ah ugu takrifalay awooddii (abuse of power), islamarkaana caddaalad darro, nin jeclaysi iyo musuq ku maamulay doorashadii.
Waxa haddaba muuqata in Madaxweynaha Hirshabeelle liiska murashaxiinta ee uu soo saaray ku saleeyay si waafaqsan sharciga iyo rabitaanka muasharixiinta, oo ka fog ku takrifal awood, musuq , caddalad darro iyo nin jecleysi.
Md. Guudlaawe ayaa dhammaan masuuliyiintii horey ugu fadhiyay kursiga iyo dhamaan dadkii kale ee isa soo sharaxayba ku soo daray liiska. Taasi oo ah mid aad uga gaddedisan qaabkii maxiisnimada ku salaysnaa ee ay adeegsadeen Axmed Madoobe iyo Siciid Deni.
Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa ilaa hadda waxa uu noqonaya mdaxweynihii ugu caddaaladda fiicnaa marka la fiiriyo qaabka doorashada musharrixiinta Aqalka Sare ee ilaa hadda qabsoontay.
The post Madaxweynaha Hirshabeelle oo ka leexday dariiqii fooshaxumaa ee ay hore u qaadeen Jubbaland iyo Puntland appeared first on WardheerNews .
« Afar guddi oo la la’yahay oo muujinaya qorshaha Farmaajo ee guddiga Ikraan Tahliil
Daawo: Hooyo Qaali oo si qiiro leh uga jawaabtay tallaabadii uu qaaday Farmaajo »